BVC 4 år - andra språk - 1177
Hälsobesök på BVC vid 4 år - somaliska
BVC: 4 sano
Hälsobesök på BVC vid 4 år - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa la kulmi doonaa kal-kaalisada ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka. Waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.
Waxaa la tix raaci doona waxyaabihii lagaga hadley kulamdii hore. Kalkaalisada caafimaadka iyo ilmuhu waxaa ay si wadjir ah isku dul saari doonaan looxaant lagu ciyaaro (pussel) isla markaana waxaa ay ka wada hadli doonaan waxyaabah u fiican jidhka. Kalkaalisad caafimaadku waxaa ay fiirin doontaa dhaqdhaqaaqa ilmaha sida uu hadlayo iyo sida uu wax y fahmayo. Sidoo kale waxaa la baadhi doonaa argga ilmaha, waa la miisaami doonaa isla markaana waxaa la cabiri doonaa dhererkiisa.
Waxaa caadi ah in laga hadlo cuntooyinka uu ilmuhu cuno, sida uu yahay jawiga marka qoysku wada cunteynato wakhtiyda cuntada, sida uu yahay jawiga ilmaha marka uu joogo dugsiga xanaanada carruurta, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan.
Ku soo dhawoow kulanka mcaafimaadka marka ilmuhu jiro 4 sano ee ka dhici doona rugta daryeelka caafimaadka!
Si awadjir ah ula fiiri ilmahaaga sawirada ka hor inta aanad noogu iman booqashada rugta daryeelka caafinaadka dhalaanka BVC. Waxaa fiican in adiga iyo ilmaha labadiinuba aad ogaataan waxa dhici doona isla markaana aad u diyaar garowdaan. Ilmahaagu waxaa uu sameyn doonaa waxyaabo kala duwan si ay kalkaalisada caafimaadku u aragto sida uu ilmuhu u korayo.
Muddo yar gaaban baad ka wada hadli doontaa arimo ku saabsan xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahey in aad sameyso.
Ku socota waalidka:
Kalkaalisda caafimaadku waxaa baadhi doontaa aragga
Kalkaalisada caafimaadku waxa ay baadhi doontaa sida ay tahay argtidaadu. Hal il ayaa wax lagaa xidhi doonaa si aad hal il oo kaliya wax ugu fiirin karto.
Kani waa baadhitaan ku saabasan aragtida. Waxaa haboon in aad tijaabis in aad il ka mid ah indhahaaga daboosho marka aad joogtiin guriga ka hor booqashada.
Waxaa aad dhabtaada ku haysan doontaa sabuurad ay xarfo ku qoranyihii. Kolba mid ka mid ah xarfaha ku qoran sabuurda ee ay kalkaalisada caafimaadku sheegto ee ku qoran sabuurada weyn ayaad tilmaami doontaa. Marka la dhameeyo badhitaanka ishaas ayaa hadana baadhitaan kaa la mid ah lagu sameyn doonaa isha kale.
Ilmahaagu uma baahna in yaqaano magaca xarfaha, waxaa loo baahanyahay oo kaliya in la tilmaamo.
Waxaa laguu dhiibi doonaa shaxda lagu magacaabo Bamse (Bamsepussel). Adiga iyo kalkaalisada caafimaadka aya si wadajir ah uga hadli doona waxyaabo ku saansan sawirka.
Waxaa aad ka hadli doontaan waxyaabaha jidhka u fiican. Waxaa la siin doonaa ilmahaag jornaalka Baamse (Bamsetidning), Waxaa fiican in aad ku akhridaan guriga.
Sawir sawir gacmaad
Waxaa aad sawiri doontaa sawir gacmeed.
Ku socota qofka weyn: :
Halka waxaa aan fiirin doonaa sida fiican ee ilmahaagu wax u qori ama sawiri karo.
Kuul qori ka sameysan
Waxaa aad kuulo lagu tixi doontaa dun.
Waxaa uu baadhitaankani ku saabsanyahay sida fiican ee ilmahaagu wax u qori ama sawiri karo (finmotorik).
U soco si dheellitiran
Waxaa aad ku socon doontaa xarriiq/layn si loo fiiriyo in socodkaagu dheelitiranyahay.
Halka waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doonaa sida uu yahay koboca dhaqdhaqaaqa iyo dheelitirka ilmaha.
Illustrator: Sclera symbols
Waxaa la baadhi doonaa ilamaha isaga oo xidhan kalsoonka.
Miisaanka jidhkaagu intuu dhanyahay? Waxaa sawirka kaaga muuqda miisaan. Waxaa lagaa rabaa in aad miisaanka ku dul joogsato muddo yar oo kooban si ay kalkaalisada caafimaadku u miisaanto miisaanka jidhkaaga.
Dhererkaagu intuu dhanyahay? Kalkaalisada caafimaadka waxaa ay cabiri doontaa inta uu dhererkaagu noqdey. Marka la cabirayo dhererkaaga waxaa la isticmaali doonaa qalabka lagu cabiro dhererka ee kaaga muuqda sawirka (mätsticka). Waxaa loo baahanyahay in aad is toosiso muddo yar oo gaaban inta la fiirinayo inta uu dhererkaagu yahay.
Kalkaalisada caafimaadka waxaa ay miisaami doontaa misaanka ilmaha isla markaana waxaa la cabari doonaa dhereka ilmaha mar kasta oo ilmuhu soo booqdu rugtad daryeelka caafimaadka dhalaanka, si loo arko sida uu yahaya koritaanka ilmuhu. Ilmaha waxaa la baadhi doonaa isaga oo xidhan kalsoon kaliya.
Adiga iyo kalkaalisada caafimaadku waxaa aad si wadajir ah u fiirin doontaa sawiro ku yaala buug. Markaa ka dib waxaa aad ka sheekeyn doontaa waxyaabaha aad ku aragto buugga.
Tani waa tijaabo la smeeyo marka uu ilmuhu jiro 4 sano, taas oo muujinaysa kobaca iyo fahamaka xagga luqadda ee ilmaha.
Ka hor inta aynaan is nabad galyeyn, wax yar baan wada hadli doonaa.
Waxaa aad ka hadli doontaan sida uu ahaa kulanka booqashadu.
Hadda kulankii booqashadu wuu dhamaadey, nabad gelyo, waxaa aan isku arki doonaa kulankan kulanka xigga marka aad soo booqato rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.
Marka uu kulanka booqashadu dhamaado. Waxaa la idin siin doonaa balan kulanka soo socda markaas oo uu ilmuhu jiro 5 sano. Haddii aad dareento in aad u baahantahay isla markaana aad rabto waxaa aad qabsan kartaa balan kaas ka horeeya.
Halakan ka akhri macluaad dheeri ah oo ku saabsan koritaanka (svenska)